Augustine Mahiga oo hareer marey roog cas oo Hargeysa loogu dhigay (Sawiro) – SBC
Augustine Mahiga oo hareer marey roog cas oo Hargeysa loogu dhigay (Sawiro)
Wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada midoobay ugu qaybsan arimaha Soomaaliya Augustine Mahiga ayaa socdaal ku tagey magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka la magac baxay Somaliland.
Mahiga ayaa waxaa si diiran loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa waxaana halkaasi ku sugayey masuuliyiin ka tirsan maamulka Somaliland.
Ambasador Mahiga ayaa garoonka diyaaaradaha ee magaalada Hargeysa waxaa loo dhigay roog cas oo aad u dheer oo loogu tala galay in uu ku socdo marka uu ka soo dego diyaaradii sidey, hase yeeshee Mahiga ayaa gees ka marey oo iska indho tiray roogaasi cas ee maamuus ahaanta loogu dhigay, arintaasi oo la sheegay in aad uga caroodeen madaxdii ka tirsendy maamulka Somaliland ee ku sugnaa garoonka.
Ambasador Mahiga ayaa kulamo kala duwan magaalada Hargeysa kula yeeshay madaxda maamulka Somaliland oo uu ugu horeeyo Madaxweyne kuxigeenka ahna kusimaha Madaxweynaha Cabdiraxman Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici), waxanaa socdaalkiisu uu ku soo aadayaa iyadoo uu ka maqan yahay Somaliland Madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo).
KKKKK alalayhe ninkaasi wuu ka raayey Roog yar bay meeshii kula soo ordeen saas dhiniciisa lamaray abooyalow maxaa kharash ku baxay rogaas uu mahiga mari waayey
Warka saxa adeer,rooga cas waxaa loo dhigayay madaxwayne siilaanyo oo markaas waqti yar ka dib ka dhdoofayay, waad aragtaa isaga inaanay ka hor iman wax xil sare ka haya,waxa kaliya ee loo diray waxay ahayd agaasimaha wasaraada arimaha debada.sxb sheekada garoowe joojiya.
kkk qosol badanaa somaliland waxbey kaga radsanaysay mahiga rooga ay u dhigtay lakin wa ku daadiyey kk lool
kkkkkkkkkkk,oo maxa loga qaadi waayay roga meesha hadi marki hore siilaanyo loo dhigay,sheeko caruureed maad wadaa.odayga yar ee jareerka ah waaba idinku jeesteyay.
Meecaad saleimaan says:
rooga cas micno maleh oo Tara ka Mahiga waxa socota gabar cas oo rear Hargaysa oo xooghayntiisa oo kula nool Nairobi….eesh calaa